Cristiano Ronaldo Walaashii Oo Shaaca Ka Qaaday In Magaca Lionel Messi Laga Mamnuucay Gurigooda Iyo Sababta Oo Ay Sharaxaad Ka Bixisay. – GOOL24.NET
Cristiano Ronaldo Walaashii Oo Shaaca Ka Qaaday In Magaca Lionel Messi Laga Mamnuucay Gurigooda Iyo Sababta Oo Ay Sharaxaad Ka Bixisay.
Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa muddo toban sano ah si toos ah ugu soo xifiltamayay kubbada cagta aduunka, waxaana la filayaa in waqtiyada soo socda uu hoos u dhici doono xifiltankoodu maadaama oo Neymar Jr iyo Mohamed Salah hadda yihiin labada xidig oo la filayo in ay saamayn wayn ku yeeshaan habkii ay Messi iyo Ronaldo u soo xifiltamayeen.
Laakiin inta aan taas la gaadhin waxaa soo baxay war layaableh oo muujinaya halka Ronaldo iyo qoyskiisa ay ka gaadhsiisan yahay xifiltanka Lionel Messi waxaana waraysi ay bixisay arin lama filaan ah shaaca ka qaaday Ronaldo walaashii Katia taas oo cadaysay in magaca Messi laga mamnuucay gurigooda.
Katia oo ah gabadh ay Cristiano Ronaldo walaalo yihiin ayaa wargayska caanka ah ee dalka France ee L’Equipe u sheegtay in xarafka “M” laga mamnuucay qoyskooda iyada oo sababtana ku sheegtay in Ronaldo uu u baahan yahay in la ilaaliyo marka uu soo galo albaabka gurigooda.
Inkasta oo ay Katia sheegtay in magaca Messi laga mamnuucay gurigooda, haddana waxaa la ogyahay oo aan qarsoodi ahayn in wiilka gurdeed ee Ronaldo uu taageero u yahay Messi iyada oo Ronaldo laftiisu uu warayso kala duwan ku sheegay in wiilkiisa Cristiano Ronaldo Jr uu taageero u yahay Messi balse aanu Camp Nou gayn karin si uu u daawado kulamada Barca.
Cristaino Ronaldo walaashii Katia ayaa si cad u sheegtay in gurigooda dhexdiisa aan looga hadli karin magaca Lionel Messi waxayna tidhi: “Anagu guriga dhexdiisa kagama hadalno Messi. Cristiano waxa uu ogyahay in banaaka albaabka ay dabayli ka jirto isla markaana waxa uu ogyahay in marka uu soo dhaafo albaabka ee uu dibada ka soo galo in la ilaalinayo. Halkan waa goobta uu dhamaan baytariyadiisa ka dabaysto”.
Ronaldo walaashii Katia oo xaalada walaalkeed ka sii hadlaysa ayaa tidhi: “Isagu aad ayuu diirada u saaraa nasiibkiisa, laakiin sidoo kale wuu walwalaa. Waxa uu kulanka ka ciyaaraa maskaxdiisa isaga oo ka fikiraya sida ay waxyaabuhu u dhici doonaan”.
Intaa kadib Katia ayaa ka hadashay sanadaha uu Cristiano Ronaldo sii wadan karo kubbada cagta maadaama oo uu 33 sano jir yahay waxayna tidhi: ” Waxaa jira qaar ciyaara ilaa 37 sano jirkooda, Cristiano mishiin ma aha, laakiin waxa uu sii wadan karaa in uu ciyaaro inta uu awoodo. Waxaan filayaa saddex ama afar sanadood oo dheeraad ah”.
Katia oo walaalkeeda amaanaysa ayaa tidhi: “Cristiano markasta waxa uu soo ahaa mid saxsan, markaasta waxa uu raadiyaa waxa ugu fiican, wax walba waxa uu u sameeyaa in uu guulaysto, laakiin marka taas laga yimaado, xaqiiqdii isagu wuu u qalmaa”.
Ronaldo iyo Messi ayaa markale la filayaa in ay ku tartami doonaan abaal marinaha shaqsiga ah ee xidiga aduunka ugu fiican iyada oo saamayn wayn ay yeelan doonaan finalka Champions League iyo koobka aduunku halka Mohamed Salah uu hadda yahay xidiga saddexaad ee Ronaldo iyo Messi ku cidhiidhyaya abaal marinaah shaqsiga ah.